बाघले फरक पार्छ- विविधा - कान्तिपुर समाचार
बाघले फरक पार्छ
पृथ्वीका प्राणी र वनस्पतिले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेपछि मात्र मानिसको अस्तित्व कायम भएको हो ।
यदि मानव अस्तित्वका आधार प्राणी र वनस्पति समाप्त भए भने हाम्रो बाँच्ने आधार कहाँ रहला ?
भाद्र २, २०७५ कमलजङ्ग कुँवर
काठमाडौँ — नेपालमा पर्सा, चितवन र बर्दियाको अधिकांश भाग र मकवानपुर, नवलपरासी, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र कञ्चनपुरका केही भाग बाहेकका जिल्लामा बाघ लोप भइसके । तर यसबाट बाघलाई के फरक पर्‍यो ? बाघ संरक्षण कसैको लहडमा, शौखका लागि, बाघ बचाउन र हाम्रा भावी पुस्तालाई देखाउनका लागि भन्ने सन्दर्भले कुनै अर्थ राख्दैन ।
बाघ नहुँदा हामी र हाम्रा भावी पुस्ता सुरक्षित र सन्तुलित वातावरणमा बाँच्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मुख्य सवाल हो । चुरे विनाश गर्ने हाम्रा पुर्खा र हामीले के हाम्रो र भावी सन्तितका लागि न्याय दियौं त ? वाग्मती नदी प्रदूषित हुँदा पनि मूकदर्शक हुने हामीले अहिले त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको छ । वाग्मतीको अन्तिम माछाले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको चरीको विलाप कवितामा भनेझैं ‘म मर्ने हो मर्छु, तर तिमी नराम्रोसँग चुक्यौ’ भनेको हामीले मनन गर्ने कि नगर्ने ?
विश्वमा बाघका उपप्रजातिमध्ये पाटेबाघ २ हजार ६ सय ३३, सुमात्रान ३ सय ७१, साइवेरियन ४ सय ३३, मलायन २ सय ५० र इन्डो चाइना २ सय ६ वटा पाइन्छन् । साउथ चाइना बाघ चिडियाखानामा मात्र बाँकी छन् । बाली, क्यास्पियन र जाभान बाघ लोप भइसकेका छन् । एसियामा नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशमा पाटेबाघको प्रजाति पाइन्छन् । नेपालका पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र तिनका वरपर मात्र ती बाघ पाइन्छन् । बाघ संरक्षण बाघका लागि होइन, मान्छेका लागि हो । वाग्मती नदीमा माछा, माछाका लागि होइन, मान्छेका लागि हो । नदीमा माछा हुनु भनेको नदी सफा हुनु हो ।
बाघ चुरे संरक्षणको सूचक हो । तर चुरे नाशिँदा तराई विनाश भए पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको छ । चुरे विनाश हुँदा अहिले तराईका मानिस काकाकुलजस्तै तड्पिरहेका छन् । पानीको अभावमा, बाढीको चपेटाबाट वर्षैपिच्छे दर्जनांै मानिसको मृत्यु, सयौं परिवार घरबारविहीन र हजारांै विगाहा उर्वर कृषि भूमि मरुभूमिकरण हुँदै गएको छ ।
प्राकृतिक र भौतिक विज्ञानले पृथ्वीका प्राणी र वनस्पतिले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेपछि मात्र मानिसको अस्तित्व कायम भएको हो भन्छ । यदि मानव अस्तित्वका आधार प्राणी र वनस्पति समाप्त भए भने हाम्रो बाँच्ने आधार कहाँ रहला ? जहाँ माछा बस्न सकेनन्, मानिस कसरी बस्न सक्छन् ? मानिसका लागि त्यो पानी कसरी योग्य हुन्छ ? माछालाई योग्य भयो भने मान्छेलाई पनि उपयोगी हुन्छ ।
यही नै हो, माछा र मान्छेको अन्तर–सम्बन्ध । बाघ र मान्छेको पनि त्यही सम्बन्ध हो । चुरे संरक्षण भयो भने त्यो घर बाघको लागि उपयुक्त हुन्छ र ऊ त्यहाँ स्थायी रूपले बस्न आउँछ । जब चुरे संरक्षण हुन्छ, त्यो मान्छेका लागि पनि बस्नयोग्य ठहरिन्छ । जसले हाम्रो बाँच्ने आधार खडा गरेको छ, जसका कारण हामी बाँच्न नभई नहुने स्वच्छ हावा, स्वच्छ पानी र खाने अन्न फल्ने उब्जाउ भूमि सुरक्षित भएको छ । हामी त्यसैलाई सिध्याउने सोच्दैछौं, योजना बनाउँदैछौं ।
यो सवाल स्वदेश र विदेशमा वनविज्ञान पढेका साथै वर्षौं वनक्षेत्रमा काम गरेका विज्ञहरूले त बुझ्दैनन् भने सर्वसाधारण, विकासे र राजनीतिक नेताका के कुरा † बाघ संरक्षणको विषय ‘बुझ्नेलाई यो कुरा गहिरो छ, नबुझ्नेलाई घर छेउमा पहिरो छ’ भन्ने उखानजस्तै हो । वाग्मती र चुरे विनाश गरेर हामीले ‘आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हानेका’ छौं । हामीले यो बुझ्न र बुुझाउन सकेनौं भने हामी वन प्राविधिक भएको भएको कुनै अर्थ रहँदैन ।
नेपालको हिमालमा हिउँ चितुवा, मध्यपहाडमा चितुवा र तराईमा बाघ पाइन्छन् । बाघ केवल सुन्दरता र शक्तिको प्रतिक, दुर्गाको वाहन भएकाले बचाउनुपर्छ भन्ने सोच दोस्रो प्राथमिकतामा मात्रै पर्छ । यसको त हाम्रो जीवन, मानव अस्तित्व र समृद्धिसँगै सम्बन्ध छ । सबै देशको भूगोल र वातावरण बाघका लागि उचित बासस्थान हुन सक्दैनन् । तर जुन देशमा यी पाइन्छन्, तिनको संरक्षण हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । हामीले बाघलाई पारिस्थिकीय प्रणालीका लागि भन्यौं । तर पारिस्थिकीय प्रणाली भनेको के हो, कतिले बुझेका छाैं । त्यसैले हामीले बाघ भयो भने चुरे संरक्षण हुन्छ र तराई मरुभूमिकरण हुँदैन भन्ने ज्ञान दिनुुपर्छ ।
नेपालमा वन्यजन्तु र प्राकृतिक सुन्दरता मुख्य पर्यटकीय आकर्षण हुन् । नेपालमा बाघ केवल संरक्षित क्षेत्रमा मात्र सीमित छन् । तर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराई, भित्री मधेस र चुरेका सबै ठाउँमा बाघ हुनु जरुरी छ । नेपालमा अहिले वयस्क बाघको संख्या १ सय ९८ छ । अब हामीले तराईलाई जोगाउने हो भने तराई, भित्री मधेस र चुरे फैलिएका हरेक जिल्लाका वनक्षेत्रमा कम्तीमा सयवटा बाघ हुनुपर्छ । यसो हुनसक्यो भनेमात्र तराईको अन्न भण्डार सुरक्षित हुनेछ । पानीका स्रोत संरक्षण हुनेछन् । तराई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगिनेछ । सबै जिल्लामा १०० भन्दा बढी बाघ हुँदा नेपालले विश्वमै धेरै बाघ हुने देशको शौभाग्य प्राप्त गर्नेछ ।
बाघ संरक्षण गर्न निकुञ्ज, आरक्ष नै चाहिन्छ भन्ने छैन । यो त एउटा उपाय वा विधिमात्रै हो । सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वनमा पनि यसको संरक्षण हुनसक्छ । जसरी मध्यपहाडका सामुदायिक वनमा चितुवा संरक्षण भइरहेका छन् । नेपालको ६८ प्रतिशत क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन र सुरक्षाका लागि मध्यपहाडमा चितुवा र हिमाली क्षेत्रको सन्तुलनका लागि हिउँचितुवा सुरक्षित हुनुपर्छ । त्यसैले हिमाल, पहाड र तराईको एकआपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहिआएका छन् । हिमालमा हिउँचितुवा र पहाडमा चितुवा नहुनु भनेको खतराको संकेत हो । यसबाट भूक्षय, भूस्खलन, बाढी–पहिरो, धनजनको क्षति र कृषिभूमि मरुभूमिकरण हुँदा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ ।
जब चुरे पहाडमा बाघ देखिनेछ, तब चुरे र तराई सुरक्षित भएको संकेत मिल्नेछ । त्यसैले अबको १० वर्षमा चुरेमा बाघ देख्न सक्ने बनाउन सक्यौं भनेमात्र चुरे, भित्री मधेस र तराई सुरक्षित हुन्छ । हाम्रो अन्न भण्डार सुरक्षित हुन्छ । आधा जनसंख्या बस्ने तराई सुरक्षित हुनु भनेको देश सुरक्षित हुनु हो । तब मात्र कृषि, जलस्रोत र पर्यटनबाट देशको मुहार फेरिने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता बिना यो लक्ष्य हासिल हुन असम्भवप्राय: छ । हाम्रा राजनेताहरूलाई यो कुरा सिकाउनु जरुरी छ ।
प्राकृतिक विज्ञानका वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनले भनेका छन्, ‘सबै जनावरलाई माया गर्नु नै मानिसको सबैभन्दा ठूलो गुण हो ।’ महात्मा गान्धीले भनेका छन्, ‘कुनै देशको महानता र समाजको नैतिक मूल्य–मान्यता मापन गर्ने आधार भनेको त्यो देश वन्यजन्तु संरक्षण र व्यवस्थापनमा कति गम्भीर छ भन्ने हो ।’ हामी अहिले व्यापक रूपमा वन्यजन्तु पालन गर्न पाउनुपर्छ भनेर हाम्रा नीतिहरूमा परिवर्तन गर्न खोज्दैछौं । यसले हाम्रो समाजलाई ‘घरको न घाटको’ बनाउँछ । त्यसो भयो भने ‘न रहे बाँस न बजे मुरली’ भन्ने उखानझैं हाम्रा वन्यजन्तु पनि रहँदैनन् र हामी पनि रहँदैनौं । वाग्मतीलाई प्रदूषित गरेर हामी जति पटमूर्ख बन्यौं, त्यत्ति नै महामूर्ख चुरेलाई सिध्याएर बन्दैछौं । चुरे नरहे हामी पनि रहने छैनांै ।
कुँवर शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हुन् ।
प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०८:०५
एसियाको शक्ति: १८ औं एसियाली खेलकुद आजदेखि
भाद्र २, २०७५ ध्रुव तुलाधर
जकार्ता — इनर्जी अफ एसिया अर्थात् एसियाको शक्ति भन्ने सन्देश बोकेर १८ औं एसियाली खेलकुद शनिबार इन्डोनेसियाको राजधानी सहर जकार्तामा सुरु हुँदै छ । एसियाका ४५ राष्ट्रका १० हजार हाराहारीमा भाग लिने खेलाडीको आतिथ्यताका लागि इन्डोनेसियाले भरपूर शक्ति परिचालन गरेको छ ।
इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विदोदो शुक्रबार एसियाली खेलकुदको टर्च रिलेमा सहभागी हुदै। तस्बिर : रोयटर्स
जकार्तामा उद्घाटन र समापन हुने यस एसियाडको अर्को आयोजक सहर पालेम्बाङ पनि हो । ४५ खेल समावेश एसियाडको १० खेल उक्त सहरमा हुनेछन् ।
सन् १९६२ मा एसियाडको चौथो संस्करण आयोजना गरेको जकार्ताले दोस्रोपल्ट एसियाको कुम्भ खेलमेला आयोजना गरेको हो । पछिल्लो समय दु्रतगतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको इन्डोनेसियाले आफ्नो शक्ति खेलकुदमार्फत विश्वमाझ प्रदर्शन गर्दै छ ।
प्रतियोगिताका लागि झन्डै १५ हजार स्वयंसेवकलाई परिचालन गरेको छ । एसियाडभर ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज पार्न ७० भन्दा बढी विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरिएको छ । यसले गर्दा दैनिक ३० प्रतिशत ट्राफिकजामबाट मुक्ति मिल्ने अपेक्षा छ । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार इन्डोनेसियाको जकार्ता विश्वकै आठौं ट्राफिक जाम हुने सहरका रूपमा चित्रित भएको थियो ।
जकार्ता विमानस्थलदेखि नै सहरका सडकका दायाँबायाँ रंगीचंगी बनाइएको छ । मुख्य स्थान, चोक, ठूला बसहरूमा एसियाली खेलकुदको प्रचार सामग्री बग्रेल्ती राखिएको छ भने ठूला होडिङ बोर्ड र डिप्से राखेर एसियाडबारे त्यत्तिकै प्रचारप्रसार गरिएको छ । खेलाडी तथा पदाधिकारीको स्वागतका लागि सयौं स्वयंसेवक परिचालन भएका छन् ।
जेराला बङ कार्नो (जेबीके) मुख्य स्टेडियममा शनिबार साँझ हुने उद्घाटनमा डेनी मलिक र इको सुप्रियान्तोको कोरियोग्राफमा चार हजार डान्सरले प्रस्तुति दिनेछन् भने चर्चित इन्डोनेसियन गायक अनगुनलगायत रैसा, तुलुस, इडो कोन्डोलोजित, फतिन, पुत्री अयुलगायतका संगीतकर्मीले कार्यक्रमलाई विशेष बनाउनेछन् । उद्घाटनका लागि १ सय २० मिटर लम्बाइ, ३० मिटर चौडाइ र २६ मिटर उचाइमा बनाइने स्टेजमा पहाडी आकृतिमा इन्डोनेसियाको कलासंस्कृति, बोटबिरुवा र फूलहरूले सजाएको झल्को दिइनेछ । हजारौं टापुको देश भनेर चिनिने इन्डोनेसियाको वास्तविक पहिचान झल्काइनेछ ।
इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विदोदोले एसियाली खेलकुदको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । मुख्य स्टेडियमसहित विभिन्न १२ इन्डोर रंगशालामा एसियाडका खेल हुनेछन् । एसियाडका लागि जेबीके रंगशाला पुनर्निर्माणलाई मात्रै झन्डै ४ करोड डलर खर्च गरेको जनाइएको छ ।
लोगो र मस्कट
एसियाडको लोगोमा रहेको सन्देश हो ‘इनर्जी अफ एसिया’ । सन् १९६२ मा पनि जकार्ताले एसियाली खेलकुद आयोजना प्रयोग भएको मुख्य रंगशाला जेराला बङ कार्नो (जेबीके) हो । लोगोमा यही रंगशालाको एरियल–भ्यु राखिएको छ । यसमा रंगशालाका मुख्य ८ द्वार संकेत गरिएको छ र बीचमा रहेको छ सूर्य । सूर्य एसियाली खेलकुदको लोगो रहँदै आएको छ ।
आयोजकको दाबी छ, लोगोले ती पक्षको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । एसियाली, इन्डोनेसिया र यहाँको खेलकुद अनि एसियाली देशबीचको मैत्री सम्बन्ध । त्यस्तै मस्कटमा इन्डोनेसियालाई विविधतालाई प्रकट गरिएको छ । यसपल्ट मस्कटमा तीन जनावर छन्, जुन आपंैmमा एसियाली खेलकुदका लागि नयाँ इतिहास हो । यसमध्ये इन्डोनेसियाको पूर्वको प्रतिनिधित्व गर्दै चरा ‘बिन–बिन’, पश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्दै गैंडा ‘इका’ र मध्यक्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै मृग ‘अटुङ’ रहेका छन् । यी ३ जनावरले आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँको विशेषत: लुगा पनि लगाएका छन् ।
एसियाडमा नेपाल अहिलेसम्म स्वर्णका लागि तड्पिरहेको छ । ६७ वर्षे एसियाड इतिहासमा सहभागिता गौरवशाली भए पनि पदकलाई आधार मान्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । नेपाली खेलाडीले कुल १५ संस्करण खेल्दासम्म एउटै स्वर्णपदक जित्न सकेका छैनन् । बैंकक एसियाड, १९९८ मा तेक्वान्दो खेलाडी सविता राजभण्डारीले जितेको रजतपदक नै नेपालको गौरवशाली एसियाड पदक हो । एसियाडमा दुई पदक जित्ने नेपाली खेलाडीको कीर्तिमान भने दीपक विष्टको नाममा छ । एसियाडमा नेपालका लागि तेक्वान्दो नै सफल बनेको छ ।
पछिल्लो दुई संस्करणमा त नेपालले १–१ कांस्य पदकमै चित्त बुझाउनुपरेको छ । एसियाडमा अहिलेसम्म नेपालले कुल १ रजत र २२ कांस्यपदक जितेको छ । त्यसमा तेक्वान्दोको १ रजत र १३ कांस्य पर्दछन् ।
नेपाली खेलाडीले दक्षिण कोरियाको सोल एसियाड, १९८६ देखि पदक जित्न थालेका हुन् । यो संस्करणमा बक्सिङ र तेक्वान्दोका खेलाडीले ४–४ कांस्यपदक जितेका थिए । त्यसयता सबै एसियाडमा नेपालले पदक जितेको छ ।
के छ यसपालि ?
इन्डोनेसिया पहिलोपल्ट आयोजक बन्दा नेपालले भाग लिएको थिएन । यसपल्ट एसियाडकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै खेल र खेलाडी लिएर नेपाल एसियाडका लागि जकार्ता आइपुगेको छ । नेपालले २९ खेलमा १ सय ८७ खेलाडीलाई उतार्दै छ । त्यसमा ५६ महिला खेलाडी छन् । विगतका संस्करणमा भन्दा यसपालि धेरै खेलका खेलाडीले वैदेशिक प्रशिक्षण पाएका छन् । त्यसले गर्दा पनि पछिल्ला संस्करणको तुलनामा राम्रो नतिजा ल्याउने दाबी गर्छन् नेपाली टोलीका सेभ द मिसन केशवकुमार विष्ट । उनले भने, ‘विगतमा भन्दा यसपल्ट राम्रो नतिजा ल्याउँछौं ।’
तर स्वर्णपदक जित्न भने कठिन हुने उनको निष्कर्ष थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव समेत रहेका विष्टले तेक्वान्दो, कराँते, जुडो, उसु, बक्सिङसहित नयाँ खेलका रूपमा एसियाडमा प्रवेश पाएको पाराग्लाइडिङ र स्केटिङबाट पदक जित्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले आफूलाई खेलाडीहरूले वैदेशिक भ्रमणमा गरेको प्रशिक्षण र नतिजाका साथै प्रशिक्षकले दिएको रिपोर्टका आधारमा पदक जित्ने दाबी गरिएको बताए ।
तेक्वान्दो टोली झन्डै साढे दुई महिना दक्षिण कोरियामा प्रशिक्षण गरेर सीधै जकार्ता आएको हो भने कराँतेले जापान, उसुले चीन, बक्सिङले थाइल्यान्ड र स्केटिङले हङकङमा प्रशिक्षण गरेका थिए । पाराग्लाइडिङले पनि पछिल्लो महिना चीनमा प्रि–विश्वकपमा प्राप्त गरेको पदक र नतिजाका आधारमा एसियाडमा पदकको आस गरेको हो ।
सेभ द मिसन विष्टले एसियाडको प्रदर्शन नेपालका लागि १३ औं साग खेलकुदलाई महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यसपालि त्यहीअनुसार खेलाडी सहभागिता गरिएको बताए । उनले वैदेशिक प्रशिक्षणसहित एसियाडकै लागि भनेर सरकारसँग ८ करोड माग गरिएको तर हाल ५ करोडमात्र निकासा भएको जानकारी गराए । उनका अनुसार ६ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको र अन्य शीर्षकबाट खर्च गरिएको छ ।
दक्षिण कोरियाको चुनबुक युनिभर्सिटीमा प्रशिक्षण गरेर फर्केका तेक्वान्दो टोलीका प्रशिक्षकमध्ये एक र एसियाडका दोहोरो कांस्य विजेता दीपक विष्ट पछिल्लो समय खस्केको तेक्वान्दोका साख जोगाउन सबै खेलाडीले कडा मिहिनेत गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले दुई महिना कोरियामा कडा परिश्रम गरेका छौं । दुईवटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगितामा पनि भाग लियौं । त्यसमा गरेको प्रदर्शनले गर्दा एसियाडमा राम्रो नतिजा आस गरेका छौं ।’
पछिल्लो दुई एसियाडमा तेक्वान्दो पदकविहीन भएको थियो । त्यस्तै कराँतेलाई पनि इन्चोन एसियाडको साख जोगाउनु छ । कराँतेले पनि छोटो समय भए पनि जापानमा प्रशिक्षण गरेर आएको छ । पछिल्लो एसियाडमा विमला तामाङले कातामा जितेको कांस्य नै इन्चोनबाट भित्र्याएको नेपालको एकमात्र पदक थियो ।
यसपालि कराँतेले बन्द प्रशिक्षण पोखरामा गरेको थियो । त्यसपछि १५ दिनका लागि जापानमा विशेष प्रशिक्षणको मौका पाएको थियो ।
साख जोगाउन सक्छ त कराँतेले ? प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीलाई साख जोगाउने चुनौती छ । त्यही भएर पनि हामीले प्राप्त अवसरमा कठिन प्रशिक्षण गरिरहेका छौं । पदक जितेर साख जोगाउनलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पुगेको छैन भन्ने ठानेका छौं । हामीले तयारीमात्र गर्‍यौं तर एक्सपोजर दिन नपाउँदा आफ्नो स्तरबारे थाहा नै पाउँदैनौं । अनि अरूले कस्तो गरिरहेको छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन । दुवैको जाँच्नका लागि त अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर नै चाहिन्छ ।’
उद्घाटनको मार्चपासमा नेपालको झन्डा ओलम्पियन कमलबहादुर अधिकारीले बोक्ने भएका छन् । १० औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका स्वर्ण र १२ औं सागका कांस्य विजेता कमलबहादुरले बेइजिङ ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएका थिए । आफ्नो ६९ केजी तौल समूहका कीर्तिमानधारी तथा नेपालका बलिष्ठ व्यक्तिको उपाधि पाएका उनलाई ओलम्पियन र साग स्वर्णधारीको हैसियतमा १८ औं एसियाडको झन्डा बोक्न दिइएको विष्टले जानकारी गराए । मार्चपासमा नेपालबाट ८० प्रतिनिधिले मात्र सहभागिता जनाउनेछन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा टोली नेताका रूपमा रहनेछन् ।
नेपालको कुस्ती, ब्याडमिन्टन र कबड्डीको टोली शुक्रबार बिहान जकार्ता आइपुगेको छ । अन्य खेलका खेलाडी वैदेशिक प्रशिक्षणबाट सीधै जकार्ता आएका हुन् भने केही खेलाडी आफ्नो खेल तालिकाअनुसार आइपुग्नै बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
जापान र चीन हाबी
एसियाली खेलकुदको इतिहासमा जापान र चीन शक्तिशाली राष्ट्रमा दरिएका छन् । एसियाडको १८ औं संस्करण आइपुग्दा दुवै राष्ट्रले २–२ पल्ट एसियाको कुम्भखेल मेला आयोजना गरिसकेका छन् । जापानले १९५८ को टोकियो र १९९४ को हिरोसिमा एसियाड आयोजना गर्दा चीनले १९९० को बेइजिङ र २०१० ग्वाङझाउमा एसियाड सम्पन्न गर्‍यो । एसियाडमा जापानको सहभागिता सुरुआतदेखि नै रहे पनि चीन भने १९७४ को तेहरान एसियाडबाट एसियाली खेलकुदमा छिरेको हो ।
अहिलेसम्म यी दुई राष्ट्रमात्र पदकका हिसाबमा अब्बल स्थानमा रहेका छन् । पहिलोदेखि आठौं संस्करण (नयाँदिल्ली १९५१ देखि बैंकक १९७८) सम्म जापानले वर्चस्व जमाएको थियो भने त्यसपछि चीनलाई पछाडि पार्ने कुनै राष्ट्र निस्किएको छैन । जापानको उत्कृष्ट प्रदर्शन भनेको १९६६ को बैंकक एसियाड हो, जहाँ ७८ स्वर्ण, ५३ रजत र ३३ कांस्यपदक जितेको थियो । जापानमात्र एक्लो राष्ट्र हो, जसले हरेक संस्करणमा २० भन्दा बढी स्वर्णपदक जितेको छ ।
तर चीनले आफूले आयोजना गरेका दुवै संस्करणमा जापानलाई नराम्ररी पछाडि पारेको छ । सन् २०१० को ग्वाङझाउ एसियाली खेलकुदमा चीन १९९ स्वर्णसहित अगाडि थियो । १ हजार ५ सय ७७ पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदा चीनले थप ११९ रजत र ९८ कांस्यपदक जितेको थियो । जहाँ ४५ राष्ट्रका ९ हजार ७ सय ४ खेलाडीले ४२ वटा खेलमा सहभागिता जनाएका थिए । बेइजिङमा भने चीनले १८३ स्वर्ण जितेको थियो ।
पछिल्लो इन्चोन एसियाडमा चिनियाँ खेलाडीले १९९ स्वर्ण, १०९ रजत र ८५ कांस्यपदक जितेर चीनलाई पदक तालिकाको शीर्षस्थान राखेका थिए । जापान भने तेस्रो स्थानमा थियो । उसलाई दक्षिण कोरियाले पनि उछिन्यो । १ हजार ४ सय ५४ पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदा जापानको खातामा ४७ स्वर्ण, ७७ रजत र ७६ कांस्य थियो । पछिल्लोपल्ट ४५ राष्ट्रका ९ हजार ५ सय १ खेलाडीले ३६ खेलमा सहभागिता जनाएका थिए ।
एसियाली खेलकुद फन्को मार्दै सन् १९८२ मा फेरि जन्मस्थल भारतको नयाँदिल्ली फर्कियो, तब चिनियाँ शक्तिको उदय भएको हो । चीनले दिल्ली फर्किएको नवौं संस्करणमा प्रभावशाली जापानलाई पदक तालिकामा पछाडि पारेको थियो । ६१ स्वर्ण, ५१ रजत र ४१ कांस्यपदक जितेर चीन शीर्षस्थानमा रह्यो । २३ राष्ट्रका ३ हजार ४ सय ११ खेलाडी २३ खेलमा ६ सय १४ पदकका लागि भिडेका थिए ।
१८ औं संस्करणसम्म आइपुग्दा चीन १३५५ स्वर्णसहित कुल २९७६ पदकसाथ शीर्षस्थानमा छ । ५५७ स्वर्णसहित २८५८ पदकसहित जापान दोस्रो तथा तेस्रो स्थानमा रहेको दक्षिण कोरियाले ६९७ स्वर्णसहित कुल २०४८ पदक जितेको छ । समग्र पदक तालिकाको टपटेनभित्र पर्ने चार राष्ट्र इरान, भारत, कजाकिस्तान र थाइल्यान्डले मात्र १ सयभन्दा बढी स्वर्णपदक जितेका छन् । यसपल्टको आयोजक इन्डोनेसियाले ९१ स्वर्णसहित आठौं स्थानमा छ । सबैभन्दा धेरै चारपल्ट आयोजक बनेको थाइल्यान्डले १२१ स्वर्णसहित कुल ५१२ पदक जितेर सातौं स्थान ओगेको छ । एसियाडको जन्मदाता भारतको खातामा १३९ स्वर्ण छ ।
नेपालको एसियाड पदक इतिहास (१ रजत, २२ कांस्य)
१९८६, सोल, दक्षिण कोरिया
बक्सिङबाट ४ कांस्य – स्व. दलबहादुर रानामगर, तुलबहादुर थापा, सुशील पोखरेल, मनोजबहादुर श्रेष्ठ
तेक्वान्दोबाट ४ कांस्य – राजकुमार राई, विधान लामा, रामबहादुर घर्ती क्षेत्री, राजकुमार बुढाथोकी
१९९०, बेइजिङ, चीन
बक्सिङबाट १ कांस्य – चित्रबहादुर गुरुङ
१९९४, हिरोसिमा, जापान
तेक्वान्दोबाट १ कांस्य – मानबहादुर शाही
कराँतेबाट १ कांस्य – सीता राई
१९९८, बैंकक, थाइल्यान्ड
तेक्वान्दोबाट १ रजत – सविता राजभण्डारी
तेक्वान्दोबाट २ कांस्य – सपना मल्ल र किशोर श्रेष्ठ
कराँतेबाट १ कांस्य – समरबहादुर गोले
२००२, बुसान, दक्षिण कोरिया
तेक्वान्दोबाट ३ कांस्य – दीपक विष्ट, रेनुका मगर र रितुजिमी राई
२००६, दोहा, कतार
तेक्वान्दोबाट ३ कांस्य – दीपक विष्ट, मनिता शाही र आयशा शाक्य
२०१०, ग्वान्झाउ, चीन
बक्सिङबाट १ कांस्य – दीपक महर्जन
२०१४, इन्चोन, दक्षिण कोरिया
कराँतेबाट १ कांस्य – विमला तामाङ
प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०७:४७